लाल बहादुर पण्डितको अर्को एक्सन, स्थानीय तहमा एकैपटक २० हजार कर्मचारी खटाइँदै : यस्तो सूचना आउँदै छ - hamro Desh
लाल बहादुर पण्डितको अर्को एक्सन, स्थानीय तहमा एकैपटक २० हजार कर्मचारी खटाइँदै : यस्तो सूचना आउँदै छ
काठमाडौँ , चैत्र २७ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई साताभित्र कम्तीमा २० हजार कर्मचारीलाई एकैसाथ स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ । गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पठाउन लागेको उनले बताए । ‘सरुवा मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै त्यसकै आधारमा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारीमा छौँ ।
त्यही सूचनाअनुसार करिब २० हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिँदै छन् ।’ उनले एक–दुई दिनमै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुने बताए । स्थानीय तहमा व्यवस्थित रूपमा कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयले सरुवाको मापदण्डसहितको सूचना निकाल्न लागेको जनाएको छ ।
तर, मन्त्रालयले टेरेनन् मन्त्री पण्डितलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघको मन्त्रालयमा दरबन्दी मिलान गरी बढी भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिरहेको हो । तर, सामान्य प्रशासनको तयारीमा अन्य मन्त्रालयले असहयोग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
मन्त्रालयले संघको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा दरबन्दी मिलान गरेर बढी भएका कर्मचारीको विवरण पठाइदिन पत्र लेखेको थियो । २२ चैतमा मन्त्रालयले ३ दिनको समय दिएर सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।
तर, कुनै पनि मन्त्रालयले आजसम्म मन्त्रालयमा बढी भएका कर्मचारीको विवरण नबुझाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको विवरण नबुझाएपछि सामान्यले पुनः स्मरण गराउँदै सबै मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन सोमबार अर्को पत्र काटेको छ । एक महिनाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने घोषणा गरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको कदममा सिंहदरबारबाटै असहयोग सुरु भएको छ ।
यस्तो सूचना आउँदै छ
सरकारले स्थानीय तहका लागि करिब ३७ हजार कर्मचारी रहने अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करिब १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी आवश्यक २० हजार कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयले एक–दुई दिनमै सार्वजनिक सूचना निकालेर सरुवा भएर जान चाहेको स्थानीय तह रोज्न लगाउने जनाएको छ । सरुवा मापदण्डअनुसार कर्मचारीले पदीय ज्येष्ठताका आधारमा स्थानीय तह रोज्न सक्नेछन् ।
मापदण्डअनुसार रोज्नेलाई रोजेको ठाउँमा र स्थानीय तह नरोजी बस्नेलाई मन्त्रालयले आवश्यक परेको ठाउँमा खटाउने तयारी गरेको छ ।
को-को खटिँदै छन् ?
संघका मन्त्रालय गाभिँदा बढी भएका कर्मचारी, विभिन्न विभाग, आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले स्थानीय तहमा खटाउन लागेको हो । त्यसरी खटाउँदा कनिष्ठ कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा जाने सम्भावना निकै कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा कर्मचारीले रोजेको तहमा जान पाउनेछन् । सरकारले संघमा दरबन्दी रिक्त राखेर पनि स्थानीय तहको दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
कस्तो सरुवा हो ?
मन्त्रालयले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि कर्मचारी खटाउन लागेको हो । मन्त्रालयले करिब एक साताको समय दिएर एक–दुई दिनमै कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भन्यो, ‘अब कर्मचारीले प्रदेशमा गएर काम गर्ने मनस्थिति बनाएर बस्दा राम्रो हुन्छ ।’
टी–१० लिगकाे पहिलाे खेलमै सन्दीप बने ‘प्लेयर अफ दि म्याच’
चीनले नेपालको दुर्गम गाउँमा गर्यो यति ठुलो सहयोग
यस बर्षको भाइटीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक , हेर्नुहोस् कुन समयमा छ
तपाइको असार १७ गते आइतबारको राशिफल, तपाईको कुन राशी ? यी ६ राशीका मानिसले नछुटाई पढ्नुहोला : ज्योतिषिले भन्छ …